PAKISTAN KOOXO HUBAYSAN OO WEERARAY KOOXDA KIRIKITKA EE SIRALANKA | Toggaherer's Weblog
BAAQ DHAMAAN JAALIYADA REER SOMALILAND UK IYO MADAXDA XISBIYADA QARANKA UK
TOYOTA ARM SEEKS GOVERNMENTLOAN
PAKISTAN KOOXO HUBAYSAN OO WEERARAY KOOXDA KIRIKITKA EE SIRALANKA
Weerar ay geysteen 12 nin oo hubeysan kuna qaadeen gaadhi bas ah oo siday kooxda kiriketka ciyaarta oo ka timid dalka Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay weerarkaasi ugu yaraan 6 ruux.
Kooxdan hubeysan oo si habeysan jid gooyo ugu dhigay gaadiidkii kooxdan waday iyo ciidamadii la socday ayaa rasaas ooda uga qaaday, ayagoo ka xabadeenayey gaadiidka sadex jihood.
Lixda qofood ee dhintay ayaa shan waxay yihiin ciidamadii Booliiska ee illaalo ahaan ulla socday kooxda oo markaasi kusii jeeday Stadiyumka Qadafi oo ay ciyaari ku dhexmari lahayd kooxaha Pakistaan iyo Sri Lanka.
Weerarkan oo ka dhacay magaalada Lahore ee Waqooyi bari dalka Pakistaan ayaa ah mid si weyn u argagagxiyey shacabka dalalka Pakistan iyo Sri Lanka.
Kooxda la weeraray ayaa u yimid dalka Pakistan inay ciyaar saaxiibtinimo la yeeshaan Kooxda Pakistaan, iyadoo horey kooxaha caalamka u diideen inay tagaan dalka Pakistaan arrimo la xadhiidha amniga awgeed.
Shacabka Pakistaan ayaa si weyn uga xumaaday weerarkan ay qaadeen kooxdan aan la aqoon oo ah mid waji gabax ku ah Dowlada Pakistaan oo iyadu horey u balan qaaday amniga kooxdan ka timid Sri Lanka.
Kooxda Sri Laanka ayaa noqotay kooxda kaliya oo ogolaatay inay ciyaar u tagto dalka Pakistan, halka dhamaan kooxaha kale ee Adduunka ka gaabsadeen inay tagaan dalkaasi Pakistaan.
Kooxda Sri Lanka ayaa ayagu la sheegay in labo kamid ah ay soo gaadheen dhaawacyo halka 4 kalena ay dhaawacyo fudud soo gaadheen, waxaana diyaarad qumaatiga u kacda looga qaaday Stadiyumka, markii ay halkaasi gaadheen weerarkaasi kadib.
Dhinaca kale weerarkii maanta ayaa dhaawac weyn ku ah ciyaaraha dalka Pakistaan oo horey calaamatul su’aal loo saarayey ayadoo ciyaarta Kiriket oo dalkaasi si weyn looga jecelyahay ay ahayd waxa kaliya oo ay shacabka xiiseeyaan, wuxuuna weerarkan imaanayaa xili dalka Pakistaan isu diyaarinayey inuu qabto ciyaaraha adduunka ee Kiriketka sanadka 2011ka.
Warqabadka ToggaHerer Islamabad pakistan